အဆိုပါထိပ်တန်း 10 testosterone ဟော်မုန်း Ester: သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်သော? | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/အဆိုပါထိပ်တန်း 10 testosterone ဟော်မုန်း Ester: သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်သော?
အပေါ် Posted 12 / 18 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
testosterone Ester ကပူးတွဲကာဗွန်ချည်နှောင်ပါဝင်သောအမှန်တကယ် testosterone ဟော်မုန်းမော်လီကျူးများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကာဗွန်ချည်နှောင်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများကသင်၏သွေးကြောထဲမှာမူးယစ်ဆေး၏နိုင်မှုအတွက် partition ကိုကိန်း, ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ရေပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နိုင်မှုဟာ Ester ပါဝင်သောကာဗွန်ကွင်းဆက်၏အရွယ်အစားအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ Long ကကာဗွန်ကွင်းဆက်ရှည်လျား Ester နဲ့ရေထဲမှာဆေးဝါးများ၏အဆိုပါ Ester ပိုရှည်သည်လျော့နည်းနိုင်မှုမှဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဥပမာ, testosterone ဟော်မုန်း propionate Ester သုံးကာဗွန်ချည်နှောင် CCC ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီသုံးကာဗွန်ချည်နှောင်ဤသည်၌ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည် testosterone ဟော်မုန်း Ester.
Wဦးထုပ် testosterone ဟော်မုန်း Ester ဖြစ်ပါသည်s?
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Ester ခေါင်းစဉ်များစွာသောလူမှရှုတ်ထွေးလျက်ရှိသည်နှင့်သင်သည်များစွာသောပညာရှင်များကပေးတဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တှေ့ရခဲနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများ, သင်ထားတဲ့ Ester testosterone ဟော်မုန်းလိင်ဟော်မုန်းနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ဖို့ရွေ့လျားရှေ့မှာအဘယ်သူရှိသည်ကိုနားလည်ရန်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ Ester တဦးတည်း, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကာဗွန်ချည်နှောင်ထားဓာတုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Ester ၏အရွယ်အစားရရှိနိုင်ကာဗွန်ချည်နှောင်၏နံပါတ်၏ရလဒ်အဖြစ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျယခု testosterone ဟော်မုန်း Ester နားလည်ရန်တူညီသီအိုရီလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ငယ် Ester အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းနည်းပါးလာကာဗွန်ချည်နှောင်အဖြစ်ကောင်းစွာရေနှင့်သွေးထဲမှာပိုပြီးပျော်ဝင်ဖြစ်ကြပါပြီ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုများနှင့်ကြွက်သားအဆောက်အဦများအတွက်အများအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်ပေးသောသဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူလူများအတွက်, testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ဆရာဝန်ယူပြီးပြီးနောက်သူတို့သည်သင်၏အသွေးနှင့်ရောနှောမည်ဖြစ်ပြီးသဘာဝမြားအလားတူရလာဒ်များပေးသောမျိုးစုံ testosterone ဟော်မုန်း Ester မူးယစ်ဆေးဝါးများသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအသက်အရွယ်နှင့်အမျှ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုဆင်းသွားပါ။ အဆိုပါဟော်မုန်းပမာဏအစောပိုင်းလူကြီးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအများအားဖြင့်မြင့်သောဖြစ်ကြသည်။
35 နှစ်ပေါင်းနှစ်အရွယ်မှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းပမာဏအထက်ထိုကဲ့သို့သော hypogonadism အဖြစ်ရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ပေမယ့်ဆင်းကိုစတင်ပါ။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းတူညီသောသက်ရောက်မှုတဦးတည်းအမျိုးအစားမှအခြားမှကွဲပြားပေမယ့်အများစုရှယ်ယာ esters ။ အဆိုပါထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအခြားအဆိုးကျိုးများခေါင်းကိုက်ခြင်း, အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူပါဝင်သည်စဉ်ဥပမာ, ဆေးထိုးဧရိယာရောင်ရမ်းခြင်းပုံမှန်ပါပဲ။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းလိုအပ်သလဲ?
testosterone လေ့အထီးဟော်မုန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်း။ အဘယ်အရာကိုများစွာသောလူမသိရပါဘူးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးဟော်မုန်းထုတ်လုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ testosterone သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောက်ျားဝိသေသလက္ခဏာများကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသွေးကြောကနေတစ်ဆင့်အခြားအခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများမှသွားရောက်ကာထို့နောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးတည်နေရာအတွက်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါဟော်မုန်းကိုအောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိ၏
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါကသင်၏ကျောက်ကပ်အထက်တည်ရှိသည်သော adrenal ဂလင်း၌တည်၏။
testosterone ဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်စေကျားမအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းမညီမမျှပြဿနာကိုအချိန်အတွက်ကုသမပေးလျှင်ပိုမိုဆိုးရွားရအံ့သောငှါပြင်းထန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
testosterone ဇယား esters
Proviron နှင့် Nolvadex
ClomiGen နှင့် NolvaGen
testosterone cypionate နှင့် testosterone ဟော်မုန်း enanthate
ပျမ်းမျှထိုး တစ်ပတ်ကို 250-750
ဘဝတစ်ဝက် 2-3 ရက်သတ္တပတ်
ရေ retention ကို ဟုတ်ကဲ့
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု, ဝက်ခြံ, ရေ retention ကိုနှင့် testicular ကျုံ့။
ကာကွယ်မှု Nolvadex နှင့် proviron တစ်ခုမှာ tab ကိုနေ့စဉ်
recovery 1 နေ့ရက်ကာလအဘို့ Clomid 20 tab ကို
testosterone decanoate နှင့် testosterone ဟော်မုန်း Isocaproate
ပျမ်းမျှထိုး တစ်နေ့လျှင် 50-100mgs
ဘဝတစ်ဝက် Decanoate, 3-4 ရက်သတ္တပတ်
Isocaproate2ရက်သတ္တပတ်
ရေ retention ကို အနည်းဆုံး
လှုပ်ရှားမှု Decanoate -delayed
အပြုသဘောသက်ရောက်မှု တိုးတက်စွမ်းအင်, ခက်ကြွက်သားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအကျိုးအမြတ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု, gynecomastia, ဝက်ခြံနှင့်အ testicular ကျုံ့
ကာကွယ်မှု သံသရာတစ်လျှောက်လုံး Nolvadex နှင့် Proviron ၏ 1 tab ကို
recovery ကုသမှု၏နောက်ဆုံးသောနေ့၌ပြီးနောက် 1 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ် Clomid -20 tab ကို။
hCG 2500-5000IU အပတ်စဉ်, သင့်ကုသမှုသံသရာ၏နောက်ဆုံးသောနေ့၌ပြီးနောက် 20days ။
testosterone undecanoate (ထိုးဆေး)
ပျမ်းမျှထိုး 1000mg / 14 ရက်သတ္တပတ်
အပြုသဘောသက်ရောက်မှု ပိုကောင်းပြန်လည်နာလန်ထူ, ပိုကောင်းတဲ့သွေးကြော, တိုးမြှင့်စွမ်းအင်နှင့်ကြွက်သားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဝက်ခြံ, ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု, testicular ကျုံ့နှင့် gynecomastia ။
ကာကွယ်မှု ကုသမှုသံသရာတလျှောက်လုံးနေ့စဉ် proviron နှင့် Nolvadex ၏ 1 tab ကို
recovery Clomid - ကုသမှုသံသရာပြီးနောက် 20 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်တဦးတည်းတက်ဘလက်။
ပျမ်းမျှထိုး 250mg / အပတ်စဉ်
ဘဝတစ်ဝက် 1-3 ရက်သတ္တပတ်
အပြုသဘောသက်ရောက်မှု ပိုကောင်းပြန်လည်နာလန်ထူ, အစှမျးသတ်တိနှငျ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြွက်သားအကျိုးအမြတ်, တိုးတက်လာသောစွမ်းအင်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သွေးကြော။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု, ဝက်ခြံ, gynecomastia နှင့် testicular ကျုံ့။
ကာကွယ်မှု Proviron နှင့် Nolvadex - သင့်ကုသမှုသံသရာတစ်လျှောက်လုံး 1 tab ကို / နေ့
သံသရာပြီးနောက် 1 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ် Clomid- 20 tab ကို
HCG- သင့်ရဲ့သံသရာပြီးနောက် 2500 နေ့ရက်ကာလအဘို့အပတ်တိုင်း 5000-20 IU သည်ကနေအထိမဆိုထိုးယူပါ။
ထိပ် 10 testosterone ဟော်မုန်း Ester ဘာတွေလဲ?
imbalanced testosterone ဟော်မုန်းမှဒီဖြေရှင်းချက်သင့်ရဲ့အနီးဆုံးဆေးခန်းကနေဆေးဝါးအကူအညီရှာသည်။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Ester သင့်ရဲ့အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းဆက်ဆံပါနှင့်ကြွက်သားအဆောက်အဦများအတွက်အသုံးပြုသောစံမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသော testosterone ဟော်မုန်း Ester ရှိပါတယ်, သို့သော်, ပဲသင်၏ဆရာဝန်ကနေညာဘက်ကိုဆေးညွှန်းအရ, ကောင်တာကျော်ကသူတို့ကိုမဝယ်ကြဘူး။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Ester အများအားဖြင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်လိုသူအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဦးဆောင် testosterone ဟော်မုန်း Ester အချို့သည်ပါ၏
testosterone Acetate ဆေးပညာလယ်ပြင်၌မိတ်ဆက်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံး testosterone ဟော်မုန်း Ester ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 1936 အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ testosterone acetate, ယောက်ျားကို testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်း၏ပုံစံအတွက်လာမယ့်အစာရှောင်ခြင်း-သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများအပြားလူနာသို့မဟုတ်အားကစားသမားများအတွက်ကစံပြစေသည်မူသောသင်တို့သွေးကြောထဲမှာပိုမြန်ပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာအပျေါမှာ, အ acetate Ester အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မယ်အခြား testosterone ဟော်မုန်း Ester မှချက်ချင်းနီးပါးဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်စတင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတို testosterone ဟော်မုန်း Ester တစ်ဝက်အသက်တာ၏, သင်အတက်အကျမှရသောအကြောင်းအရာကတော့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့2ရက်တိုင်း3ပြီးနောက်အနိမ့်ဆေးညွှန်းယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
testosterone acetate ဆေးထိုးနာကျင်စေခြင်းငှါနှင့်ဆေးထိုးဒေသများမှာရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အသစ်-အသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲအချိန်အတန်ကြာအချို့နာကျင်မှုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆေးညွှန်းဖို့အသုံးပြုရရှိပြီးနောက်, သငျသညျဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်။ သက်ရောက်မှုတည်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, အခြားရွေးချယ်စရာသောက်သုံးသော options များပေးရန်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။
testosterone Acetate သောက်သုံးသော
testosterone acetate သောက်သုံးသော သင့်ရဲ့အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်၏ဆရာဝန်အားဖြင့်ဆေးညွှန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်စံဆေးများ 100mg, 200mg, 500mg နှင့် 1000mg ကနေအထိ ဒါပေမယ့်ကိုသာညာဘက်သောက်သုံးသောလိုချင်သောရလဒ်များကိုကယ်နှုတ်မည်သတိရပါ။ အဆိုပါသောက်သုံးသောအပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ဆေးစစ်ပြီးနောက်ဖြစ်စေ, သင့်ဆရာဝန်များကအပိုင်းပိုင်းခွဲထားရမည်။ အခြားသူများကိုဆေးညွှန်းလုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်တိုးပွားလာနေချိန်တွင်အချို့လူများကသာသေးငယ်တဲ့ဆေးများမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ testosterone ဟော်မုန်း acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ကတည်းကသင့်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်မရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူရန်မထားပါနဲ့။ အမှု၌သင်တို့သင်သည်သင်၏ကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုသိပ်သည်းဆမြှင့်တင်ရန်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်သည့် testosterone ဟော်မုန်း acetate ကာယဗလအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်အနေနဲ့အားကစားသမားဖြစ်ကြသည်။
testosterone Acetate ကာယဗလ
တစ်ဦး CAS NO နှင့်အတူ: 1045-69-8, testosterone ဟော်မုန်း acetate အများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလ၏စိတ်နှလုံးကိုအနိုင်ရခဲ့သည့်လက်ရှိစျေးကွက်အပေါ်အမြန်ဆုံးသရုပ်ဆောင် Steroid တစ်မျိုးကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသင့်ရဲ့ထိုးတာပြီးနောက်ချက်ချင်းနီးပါးအလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်သည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောတစ်ရှူးအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ကြွက်သားများနှင့်အပူလောင်ဆီအပါအဝင်ကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုပြီး testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အလိုရှိသောရလဒ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အဘို့အတစ်ကာယဗလမယ်အဖြစ်, သငျသညျမြားကိုလညျးယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာအတူသောက်သုံးသောအတူလိုက်ပါရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး မူတည်. နှစ်ဦးစလုံးပါးစပ်နှင့်ထိုးဆေးပုံစံတည်ရှိ။ ထိုသို့သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ရန်, သင်မှတက်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, သင့်ဆရာဝန်ကိုသင်ဆေးစစ်ပြီးနောက်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။
testosterone Acetate တဝက် ဘဝနှင့်သံသရာ
အမြန်ဆုံးသရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးအကြားဖြစ်ခြင်းအဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း acetate2ရက်3တစ်ဝက်ဘဝနှင့် 12 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုတဲ့ကုသမှုသံသရာရှိပါတယ်။ အဆိုပါဆရာဝန်သင်၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. အကောင်းဆုံးကိုထိုးခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း acetate သံသရာအတူတက်လာပါလိမ့်မယ်။ သူသည်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည် / ရှိပါတယ်နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်သောက်သုံးသောတစ်ခု option ကိုသင်နှင့်အတူအဆင်ပြေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြလည်းဖြစ်တယ်, s ကို။ သင်တို့သည်လည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ထိုကဲ့သို့သော Proviron ကဲ့သို့သောအခြားပါးစပ်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။
testosterone Acetate အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အဓိက testosterone ဟော်မုန်း acetate အကျိုးကျေးဇူးများကိုအချို့သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ;
ဒါဟာသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုပြသခံရပြီးနောက်သင့်ရဲ့ကြွက်သားသို့ထိုးသွင်းနိုင်သည်ကို Self-ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းရန် testosterone cypionate အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Depo-testosterone အောက်မှာလာ, သင်အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအတွက်သို့မဟုတ်သင့်ဆေးဘက်စတိုးဆိုင်ကနေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်မူးယစ်ဆေးစနစ်တကျအသုံးမလျှင်စေခြင်းငှါကြောင့်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားသည်။
တစ်ဦး CAS နံပါတ် 58-20-8 သည့် testosterone cypionate နှောင်းပိုင်း 1940s အတွက်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့် 1951 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု မှစ. , မူးယစ်ဆေးအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလအဘို့ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာကြွက်သားကြီးထွားတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဖြစ်ပိုပြီးခွန်အားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်များကိုနေသောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆျော။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်. မူးယစ်ဆေး 1 ရက်သတ္တပတ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်4အတွက်ဆေးထိုးဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွအေနေသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ညာဘက်ထိုးသိရန်ဆေးစစ်ဘို့အသွားကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။
testosterone Cypionate လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား
testosterone cypionate ရလဒ်များကို အန်ဒရိုဂျင်၏အတန်းပိုင်သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူသည်။ ထိုနည်းတူ၌ဤဆေးအုပ်စုသည်အလုပ်အတွက် steroids နှင့်အတူတူပင်အခြေအနေများဆက်ဆံပါ။ ဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ်ရန်ရန်အနေအထား၌မသော testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကတည်းက testosterone cypionate ယောက်ျားအတွက် hypogonadism ၏ကုသမှုများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဆရာဝန်ကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ဆေးထိုးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဤမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးပြီးနောက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တချို့ကဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါမှမဟုတ်ဆေးထိုးဧရိယာ, အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူနှင့်အခြားသူများအကြားခေါင်းကိုက်န်းကျင်ရောင်ရမ်းခြင်း။
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း cypionate စျေးနှုန်းများ တဦးတည်းရောင်းချသူထံမှအခြားမှကွဲပြား, အရှင်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာမူးယစ်ဆေးဆေးညွှန်းပူဇော်နိုင်သူတစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူရဖို့ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့သုတေသနပြုလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းသင်တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာညာဘက် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ထိုးရကူညီပေးနေအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။ ပိုလျှံမူးယစ်ဆေးထိုးတာကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုလိုကျနာသေချာအောင်အရှင်အမြဲပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
testosterone Cypionate ဆေးတခါသောက်
ဤသည်တစ်ပတ်လျှင် 200mgs မှ 800 တစ်ဦးအကြံပြု testosterone ဟော်မုန်း cypionate သောက်သုံးသောနဲ့ထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏သံသရာအဆင့်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့သံသရာ၏အဆုံးအားဖြင့်အောင်မြင်ရန်ချင်ပေါ် မူတည်. ညာဘက်ထိုးသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆေးထိုးသင့်ရဲ့အထက်လက်မောင်းကြွက်သားသို့မဟုတ်သင့်တင်ပါးမှတဆင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။ သင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်ခြားပူဇော်နိုငျသညျ, သို့မဟုတျသငျကိုလည်းလစဉ်သောက်သုံးသောအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။
testosterone Cypionate တဝက် အသက်
testosterone cypionate Steroid တစ်မျိုးအထိ 8 ရက်ပေါင်းတစ်ခုတက်ကြွစွာဘဝရှိပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလအသုံးပြုတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဖြည့်စွက်၏တဦးတည်းအကြားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း cypionate ဆေးထိုးပိုကောင်းရလဒ်အတွက်7ကာလ၏ကြားကာလမှာယူရပါမည်။
testosterone Cypionate ကာယဗလ
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလာမည့်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကာယဗလနှင့်အားကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြည့်စွက်သည်။ testosterone cypionate သင်လိုအပ်သောကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်လုံလောက်သောစွမ်းအင်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်။ ကမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏အစောပိုင်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မှီရလဒ်များကိုကြည့်, သင်သည်ဤသည်သင်၏ကာယဗလအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် excel မှအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏တဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ့ဆုံရန်အဘို့, သငျသညျသငျ့လျြောသောအစားအစာနှင့်အလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးအဖော်လိုက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
testosterone Cypionate အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကရညျအသှေးရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကဒီ Steroid တစ်မျိုးနဲ့တူအတော်များများပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလ။ သင်အပတ်စဉ်ထိုးနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်အထူးသဖြင့်လျှင်လစဉ်ဆေးထိုးဘို့သွားကြဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခြား testosterone ဟော်မုန်း cypionate အကျိုးကျေးဇူးများကို ပါဝင်သည်;
သင်ကြွက်သားတည်ဆောက်ကူညီပေးပါမည်တဲ့ဖြည့်စွက်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် testosterone ဟော်မုန်း decanoate သင်တို့အဘို့, လက်ျာထုတ်ကုန်သင်သည်စွမ်းအင်ပေးအဖြစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီမီးရှို့ရမည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်လာနှငျ့သငျရှေးခယျြအမျိုးအစားကိုသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၌သင်တို့၏အလုံးစုံအောင်မြင်မှုအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို testosterone ဟော်မုန်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ အတော်များများကကာယဗလကိုသုံးပါ testosterone DECANOATE steroids ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအန်ဒရိုဂျင် receptor များဖြစ်ပေါ်ရန်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူတို့သညျအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ရမယ်။ သင်သည်လက်ျာသောက်သုံးသောနှင့်အစားအစာကိုလိုက်နာပါလျှင်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဘို့, ဒီမူးယစ်ဆေးမှော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
testosterone decanoate ကြောင့်ကအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးအပြုသဘောရလာဒ်များရန်၎င်း၏လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ အဲဒါကိုကာယဗလမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များမှီကူညီနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်ခင်ကနဦးမူးယစ်ဆေး, ယောက်ျားအတွက်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးထိုးမှသာတစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယင်းပါးစပ်သောက်သုံးသော steroids မကြိုက်ဘူးများစွာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလထိုသို့အကြိုက်ဆုံးစေသည်။ testosterone decanoate လည်းသွေးနီဆဲလ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပေးသည်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နိဒါန်းကတည်းကယခုနှစ်ပေါင်းများစွာသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်များစွာနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သက်သေပြနေသည်။
Wဦးထုပ် testosterone decanoate ပါသလဲ
Decanoate တစ်ခု Ester ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဆောင်းပါးအတွက်သတ်မှတ်သကဲ့သို့, Ester မဆိုဒြပ်စင်များ၏ pharmacokinetics နှင့်အတူကူညီပေးသည်သည့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းအသုံးအနှုန်းများမှာ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသယ်ဆောင်အတွက်ကူညီပေးသည်ကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Ester သည့်မည်သည့်မူးယစ်ဆေး၏ထက်ဝက်-အသက်နှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကနေဦးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါသည်။ testosterone decanoate ကာယဗလ သင်သာတစ်ပါတ်အတွက်တစ်ချိန်ကမူးယစ်ဆေးဝါးထိုးသွင်းရန်လိုအပ်မည်ဆိုလိုတာက7ကာလ၏တစ်နှစ်ခွဲ-ဘဝရှိပါတယ်။ ဒါက deca ကဲ့သို့တူညီသော testosterone ဟော်မုန်း decanoate ပိန်ကြွက်သားထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲများရှိသည်သောယောက်ျားများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
testosterone Decanoate H ကိုalf အသက်
မူးယစ်ဆေး7ရက် 10 အဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တက်ကြွစွာအဲ့ဒီအချိန်မှာသင့်ရဲ့ထိုးတာပြီးနောက်။ ထို့ကြောင့်သင်ကတစ်ပါတ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ယူရပါမည်ထိုး။ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်အတွက်ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်။
testosterone Decanoate ဆေးတခါသောက်
ကာယဗလရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 250mgs ထံမှတစ်ပတ်လျှင် 1000mgs ဖို့အကြံပြု testosterone ဟော်မုန်း decanoate dosge အကွာအဝေး။ အရင်ကဆိုရင်တစ်ပတ်ကို 250-500gms တာဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်ဆေးထိုးလာမယ့်သံသရာအတွက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ လက်ျာအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအများဆုံးရလဒျမြားနှငျ့အကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိအတွက်စံပြဖြစ်လိမ့်မည်။
testosterone decanoate အကျိုးခံစားခွင့်
သင်ဤမူးယစ်ဆေးသုံးခြင်းဖြင့်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုအဓိက testosterone ဟော်မုန်း decanoate အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှန်ကန်စွာပါဝင်သည်;
ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်သို့မဟုတ်ပါဝါ Enhance ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, cypionate vs. testosterone ဟော်မုန်း decanoate အတူတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ရလဒ်ပေးခြင်း, ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်တဝက်-အသက်တာ၌လာနိုင်ပါသည်။ testosterone ဟော်မုန်း decanoate ခုနှစ်တွင်, သင်သာ cypionate ၌သင်တို့နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးရက်အတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကိုယ့်ကိုယ်ထိုးသွင်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်နေစဉ်တစ်ပတ်ကိုတဦးတည်းထိုးထိုးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူသိသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကသင့်ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးဝါးသံသရာပြီးပါကပြီးနောက်လိုအပ်ကြွက်သားတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဓိပ္ပာယ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်ခြင်းအလိုငှါဖြစ်၏။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းသတ္တိကိုပေါ် မူတည်. သင်ညာဘက်ထိုးမသုံးကြပါလျှင်တစ်ခါတစ်ရံပြင်းထန်ဖြစ်နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပေလိမ့်မည်။ ဥပမာ, သငျသညျတခါတရံပုံမှန်မဟုတ်သောချွေး, အိပ်မပျော်သို့မဟုတ်ဝက်ခြံတွေ့ကြုံခံစားပေလိမ့်မည်။ အမြဲတမ်းသင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်မည်သည့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကိစ္စတွင် / သူမ၏သူ့ကိုအကြောင်းကြား။
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောကြွက်သား, ခွန်အားမရှိခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အခြားဟော်မုန်းမညီမမျှတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေများကုသမှုအတွက်စံပြကြောင်းဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အလွဲသုံးစားလုပ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကတစ်ဦးကဆရာဝန် testosterone ဟော်မုန်း enanthate သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း enanthate အဆိုပါ 1930s အတွက်စျေးကွက်မှ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကအများဆုံးလူသိများအပြင်းထန်ဆုံးဟို steroids ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စွဲရန်, မူးယစ်ဆေးအများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအားဖြင့်အများဆုံးနှစ်သက် Steroid တစ်မျိုးကြားတွင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးမှာ, Steroid တစ်မျိုးမူးယစ်ဆေးလျင်မြန်စွာသွေးကြောထဲမှာစုပ်ယူရလုပ်ရသောမဆို Ester တွဲမခံခဲ့ရပါဘူး။ 1937 ခုနှစ်, ထုတ်လုပ်သူကဤ Steroid တစ်မျိုးနီးပါးအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ရာ Ester ဓာတုပစ္စည်းနှင့်အတူဆေးဝါးပေါင်းစပ်ပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 1950 မှာမူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်သူကအများအပြားကာယဗလယနေ့ခံစားဖြစ်ကြောင်းခွန်အားပေးခြင်းမူးယစ်ဆေးအတွက် enanthate Ester ဝင်းများပါဝင်သည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
testosterone enanthate 250 သင်စျေးကွက်အပေါ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သောပုံမှန်မူးယစ်ဆေးထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဆေးထိုးသင့်ရဲ့အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်၏ဆရာဝန်များကစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအားကစားသမားများအတွက်, ဒီထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးသင်သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမကူညီကြလိမ့်မည်, သို့သော်သင်သည်သင်၏လိုချင်သောရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ testosterone enanthate ကာယဗလ သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေဖြစ်ပေါ်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆီထိန်းညှိကူညီပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ပုံမှန်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူဆက်လက်အဖြစ်, သင်အလိုရှိကြသည်တွင်ကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်မှီပါလိမ့်မယ်။ အမှု၌သင်တို့ကိုအလွန်ရှားပါးသောရလာဒ်များ, အကူအညီနဲ့ဘို့သင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ရရန်ပျက်ကွက်။
ရောင်းရန် testosterone enanthate အမျိုးမျိုးသောဆေးဆိုင်များအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အွန်လိုင်းစတိုး, သို့သော်, သင်၏ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကွံဉာဏျအောမူးယစ်ဆေးဝါးကိုဝယ်ကြလော့။ သငျသညျ overdose သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုလုပ်များနှင့်ပြောင်းပြန်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှနိုင်လျှင်အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ကြသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံဘက်မှာဖြစ်သင့်ဆရာဝန်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ထိုးသတ်မှတ်ကြကုန်အံ့။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း enanthate သံသရာပြီးနောက်သင်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်သင့်ကြောင်း, အမှု၌သင်တို့ကိုမဆိုမမြင်ရပါဘူး, သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။
testosterone Enanthate ဆေးတခါသောက်
မူးယစ်ဆေးကွဲပြားခြားနားသောဆေးများလာပေမယ့်အတော်များများကဆရာဝန်များကတစ်သီးတစ် testosterone ဟော်မုန်း enanthate သောက်သုံးသောကြိုက်တတ်တဲ့။ ဥပမာ, မူးယစ်ဆေးဆေးများသင်ကာယဗလမယ်လျှင်ပိုပြီးဒီတော့မှီချင်သောရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီဖြန့်ဝေနေကြသည် - တစ်နေ့လျှင် 250mg ထံမှတစ်ပတ်လျှင် 750mgs ဤမူးယစ်ဆေးအကွာအဝေးများအတွက်စံသောက်သုံးသော။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ကာယဗလ 1000mgs အပတ်စဉ်တက်မြင့်မားဆေးများယူပါ။ အဆိုပါအရင်ကဆိုရင် '' အနိမ့်ဆေးများအကြာတွင်တိုးမြှင့်နိုင်သည့်အကြံပြုကြသည်များအတွက်သောက်သုံးသောလည်း, သင့်သံသရာအဆင့်ကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
testosterone Enanthate H ကိုalf အသက်
အဆိုပါ testosterone enanthate 10.5 ရက်ပေါင်းတစ်ခုတက်ကြွဝက်ဘဝရှိပါတယ်, သင် 10 ရက်အကြာမှာသင့်ရဲ့ထိုးများအတွက်ဆေးထိုးရသင့်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏ဆရာဝန်အစွမ်းသတ္တိကိုရဖို့နဲ့ကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးညာဘက်အပတ်စဉ်ထိုးဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
testosterone Enanthate အစဉ်အဆက်
testosterone enanthate သင့်အဆင့်ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကိုသံသရာရှိပါတယ်, သင်၏ဆရာဝန်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးများထဲမှဒီဇိုင်းစုံလင်သောအနေအထားတွင်ရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာ, အစပြုသူ testosterone ဟော်မုန်း enanthate သံသရာထိုကဲ့သို့သော Arimidex နှင့် Deca-Durabolin အဖြစ်သေးငယ်ဆေးများနှင့်အခြားခံတွင်း၏အသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစပြုသူဆေးများအသုံးပြုသောရရှိပြီးနောက်ဒုတိယသံသရာတည်းဟူသောတစ်ခုကြိုတင်ပြီးသံသရာ, အဆေးများတိုးမြှင့်နေကြသည်။ ဒီမှာကမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုလုံးကိုသံသရာများအတွက်တစ်နေ့လျှင် Dianabol 40mgs အတူအသုံးပြုသည်။ hardcore သံသရာအတွေ့အကြုံ testosterone enanthate အသုံးပြုသူများအတွက်စံပြဖြစ်သည့်ထိပ်တန်းအဆင့်ဖြစ်ပြီး, ဒီနေရာမှာဆေးများအလွန်မြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
testosterone enanthate အကျိုးကျေးဇူးများကို
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများ၏အလုပ်အကိုင်များကိုတိုးမြှင့်အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှသက်သေပြခဲ့သည်။ ယူတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်အရာ testosterone ဟော်မုန်း enanthate အကျိုးကျေးဇူးများကိုကယ်မနှုတ်နိုင်;
အားကစားသမားနှင့်ကာယဗလသူတို့ရဲ့ set ကိုရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည်သောခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားနှင့်စွမ်းအင်ကိုတိုးပှား။
ခန္ဓာကိုယ်အဆီ Burn သူတို့လိုအပ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်မှီဖို့ကာယဗလကိုကူညီပေးပါတယ်။
testosterone phenylpropionate (BAN) (အမှတ်အသားနာမကိုအမှီ Testolent), သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate, မဟုတ်ရင်ကိုခေါ် testosterone ဟော်မုန်း hydrocinnamate, (တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်AASraw) နှင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင် Ester - testosterone ဟော်မုန်း၏အတိအလင်းသည်C17β phenylpropionate Ester - ရိုမေးနီးယားအတွက်ရာထူးတိုးအတိတ်ကာလတစ်ချိန်ကပြလေ၏။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး 1955 အတွက်သိပ္ပံနည်းကျအရေးအသားမှာစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်အသားအရောင်ခွဲခြား AAS စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ္စည်းများ Element တစ်ခုရဲ့ခဲ့သေးအမြင်ကျယ်အသုံးပြုသောဘယ်တော့မှခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ testosterone phenylpropionate ထိုနည်းတူသိသိသာသာ Sustanon နှင့် Omnadren ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
testosterone phenylpropionate ပထမဦးဆုံး Sicomed ဆေးဝါးအိမ်သူအိမ်သားများက 1955 အတွက်ဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိခဲ့သည်ပေမယ့်နာမကိုအမှီအမှတ်တံဆိပ် Testolent အောက်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကဖြန့်ချိလိုက်ပြီးနောက်အဆိုပါမူးယစ်ဆေးပင်မှောင်ခိုဈေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကမရရှိနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကာယဗလအဖြစ်အားကစားသမားများအားဖြင့်အပြုသဘောကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးထိုကဲ့သို့သော Omnadren ကဲ့သို့သောအခြား testosterone ဟော်မုန်း Blend ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
testosterone phenylpropionate မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အန်ဒရိုဂျင်အုပ်စုတွင်နေရာချတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ testosterone phenylpropionate ဆေးထိုးမှတဆင့်အုပ်ချုပ်သင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးထို့နောက်သင်သည်အခြားထိုးယူနိုငျသောအခါအကြောင်းကိုငါးရက်များအတွက်တက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ကတိသစ္စာပြု testosterone ဟော်မုန်းမလုံလောက်အတူလူနာအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုအခြား testosterone ဟော်မုန်း Ester နှင့်အတူအုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီလူကြိုက်များမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုနှင့်ကြွက်သားအစှမျးသတ်တိကိုတိုးတက်အောင်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများကဒီပစ္စည်းပစ္စယစဉ်းစားသင့်ကြောင်းတစ်ဦးကအပြုသဘောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ရေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်ဖို့အချိန်ကနေမှသာပုံပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့အပြင် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ယူပြီးအသုံးပြုပုံကာယဗလတဏှာ, Force နှင့်အရည်အသွေး increment သတင်းပို့ပါ။ အားလုံးအားလုံးသက်ရောက်မှုသည်အခြား testosterone ဟော်မုန်း Ester ၏ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သို့သော်ကြောင့်ကျနော်တို့မှာအများကြီးအလည်အပတ်ခရီးတာဟာလိုအပ်, ဒါမှမဟုတ်ရေထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, လက်ျာလမ်းအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏ဤမျိုးအသုံးချဖို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
testosterone phenylpropionate အကျိုးကျေးဇူးများကို
ဤသည် testosterone ဟော်မုန်း Steroid တစ်မျိုးဟာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ကာယဗလအကြားရေပန်းစားမှုရယူလိုက်သည်။ အဆိုပါလူသိများ၏အချို့ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate အကျိုးကျေးဇူးများကို ပါဝင်သည်;
နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုစွမ်းရည်တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ကြွက်သားအဆောက်အဦမြှင့်တင်ခြင်း။
အရှင်ရှည်လျားထွက်အလုပ်လုပ်လိုချင်သောရလာဒ်များရရှိရန်အားကစားသမားများအားဖွင့်, ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်တိုးမြှင်။ ဒါဟာအစတစ်ကာယဗလမယ်နှင့်အားကစားသမားများခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနီဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်မှု၏ stimulation ။
testosterone Phenylpropionate H ကိုalf အသက်
testosterone phenylpropionate3ရက်4တစ်ဝက်ဘဝနဲ့ထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ4နေ့ရက်ကာလ၌တစ်ကြိမ်သာသင့်ရဲ့ထိုးယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျန်းမာရေး Practitioner ထိုးစီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။
testosterone phenylpropionate သောက်သုံးသော
အတော်များများကအားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလနှစ်ကြိမ်တစ်ပတ်သို့မဟုတ်တိုင်းနှစ်ရက်အကြာတွင်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါ။ အမှန်တရား testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သောက်သုံးသော တစ်ပတ်ကို 300gm ထံမှ 3000mg ဖို့နေကြပါတယ်။ သို့သော် testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့အခြား steroids ၏နှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းပြင်းထန်ဖြစ်ကြသည်။
testosterone Phenylpropionate အစဉ်အဆက်
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate Steroid တစ်မျိုး 10-တပတ်သံသရာထက်လျော့နည်းအခြားရေတို Ester နဲ့တွဲသုံးနိုင်ပါသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate သံသရာလည်းတစ်ပတ်ကို 300mg တစ်ဦးအကြံပြုထိုးနှင့်အတူတစ်ပတ်ကို 300mg နှင့်ဂန္ NPP တစ်သောက်သုံးသောရှိပါတယ်တဲ့စမ်းသပ်မှုကျားကန်သံသရာပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ ရေတိုသံသရာကာယဗလများအတွက်တစ်ဆယ်ရက်သတ္တပတ်အောက်မှာဖြစ်သင့်သည်။
Isocaproate တစ်ဦးဟို Steroid တစ်မျိုးတွဲတစ်ခု Ester ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလားတူရုံကျော်ကြား Cypionate တူသော steroids ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ကာ Ester င်သို့မဟုတ် Enanthate Ester ။ အဆိုပါ Cypionate နှင့် Enanthate ကဲ့သို့ပင် Isocaproate လွန်းသို့သော် Isocaproate ၏အကောင့်ပေါ်, ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကပူးပေါင်းတွေ့မြင်မူလတန်းရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းမှဖြည့်တွဲနိုင်ပါသည်။ testosterone-Isocaproate ၏ကြားဖူးသော monoester ပုံသဏ္ဍာန်; သင်ကရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခွင့်အလမ်းအပေါ်, ကဖွယ်ရှိကျော်ကြားမှုတစ်ခုပြောဆိုချက်ကိုစီစဉ်ထက်ပိုခဲ့, နှင့်သမျှတို့ကိုအစဉ်အဆက်တစ်ခုတည်း Ester အဖြစ် testosterone Isocaproate ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးသာမန်ပု Isocaproate Ester ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာများနှင့်ကပိုမိုမြင့်မားရည်ရွယ်ချက် testosterone ဟော်မုန်းအရောနှော၌တည်ရှိ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘယ်မှာ; အတိအလင်း Omnadren နှင့် Sustanon 250။ Omnadren နှင့် Sustanon-250 ပူးတွဲလေး Ester နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်; တဦးတည်းစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းဝင်းထစေကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလေး Ester ။
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Isocaproate တစ်ခု Ester ဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သော Omnadren နှင့် Sustanon 250 အဖြစ် steroids တွဲသောအခါမှသာရရှိနိုင်ပါတယ်။ Sustanon 1970 စျေးကွက်မှဖြန့်ချိခဲ့သည်သည့်အခါဤအ Ester များ၏သမိုင်း 250s ကနေခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ Isocaproate Ester ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြာကြာကြာရှည်နှင့်အခြား Steroid တစ်မျိုးဒြပ်ပေါင်းများကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်မူးယစ်ဆေးကို enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Isocaproate Ester steroids 7-9 လက်ထက် မှစ. အထိတစ်နှစ်ခွဲ-ဘဝပေးသည်။
testosterone Isocaproate ဆေးတခါသောက်
အဆိုပါ Isocaproate လွတ်လပ်စွာတည်ရှိပါဘူးကတည်းက testosterone ဟော်မုန်း isocaproate သောက်သုံးသောကြောင့်ထည့်သွင်းထားပြီးဘယ်မှာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာ, Sustanon 250 ၌ဤစားချင်သောသူ၏ပ၏ပါဝင်မှု 60mgs သည်နှင့် Sustanon 250 ၏သောက်သုံးသော 250mgs ထံမှတစ်ပတ်လျှင် 1500mgms ဖို့နေကြပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. များအတွက်အကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
testosterone Isocaproate တဝက် အသက်
testosterone Isocaproate ဒီ Ester နှင့်အတူပူးတွဲပါဆို Steroid တစ်မျိုး၏သောက်သုံးသောတစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ယူရပါမည်ဆိုလိုတာက 7-9 ရက်ပေါင်းအထိတစ်ဦးတက်ကြွဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ ဒီနေ့သင်ကသင်၏သံသရာဖြည့်စွက်ရင်တောင်, သင်ကာလ၏နောက်လာမည့်စုံတွဲများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများခံစားရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
testosterone Isocaproate အကျိုးကျေးဇူးများကို Omnadren နှင့် Sustanon 250 တူသောအရောနှောအပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင်နှစ်ယောက်တက်ချုပ်ဖော်ပြအတန်းသို့ကွဲကွာနိုင်ပါတယ်; အထက်ပါ attribute တွေနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝင်း၏ဤမျိုးတစ်ခုတည်း Ester ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့မတူဘဲအတွက်ပေးသည်ကဝယ်ယူတန်ခိုး။ အစောပိုင်းအဆင့်မှာလေ့လာအဖြစ်တစ်ဦး testosterone ဟော်မုန်းရောစပ်၏ခွန်အားအနည်းငယ်နှင့်ကြီးမားတဲ့ Ester သဘောအရနှစ်ခု University ၏ပိုကောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဤအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲသက်ရောက်မှုနှင့်အတူမြန်ဆန်စွာသရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးလုံးပေးခဲ့ပါ။ အဲဒါကိုနည်းနည်းများလွန်းရိုးရှင်းကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကို၏အမှန်တရားထက်ကပိုပြီးကြောင်းအလွန်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်က attribute တွေပေါ် မူတည်. အဆိုပါအချို့သောအားသာချက်များရှိသည်, Omnadren နှင့် Sustanon 250 လုံးဝကွပ်မျက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ကျနော်တို့့အလငျး၌အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာပေါ့။
သူတို့လုံးဝနှစ်ဖက်တိုးလိမ့်မယ်အဖြစ် Off-ရာသီအားကစားသမားများအတွက်ပိန်ကြုံသောဒြပ်ထုနှင့်အရည်အသွေးကျယ်ပြန့်သောပမာဏရဖို့ရန်မျှော်လင့်တစ်ဦးချင်းစီ, Isocaproate ပုံစံမျိုးစုံတစ်ခုစံပြဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်ယင်းကိုဆန့ ်. အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုပုံသငျသညျအဆီအချိုးထိုညီအစ်ကိုလျော့နည်းကြွက်သားတွေနဲ့မထိုက်မတန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆည်းပူးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြောင်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူအရောနှောအဖြစ်ကောင်းစွာဖြတ်တောက်ဘို့အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်; ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, တိုးတက်လာသောအစာခြေတိုးချဲ့ဆီစားသုံးစွမ်းရည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နှင့် testosterone ဟော်မုန်းကြီးမားတဲ့ပိန်တစ်ရှူးထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ရာဖြတ်တောက်ခြင်းအစီအစဉျကို့တောက်ပဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ။
ဒါကပိုမြန်သွေးကြောထဲမှာပျော်သောအတိုဆုံး testosterone ဟော်မုန်း Ester ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစာရှောငျ-သရုပ်ဆောင်ထုတ်ကုန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်, ထို့နောက် testosterone ဟော်မုန်း propionate သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးမှသာတနေ့တစ်ဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ သံသရာပြီးဆုံးသည်အထိထိုကြောင့်သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆေးထိုးသွင်းရပါလိမ့်မယ်။ testosterone propionate စျေးနှုန်းတဦးတည်းရောင်းချသူထံမှအခြားဖို့နေကြပါတယ်နှငျ့သငျရှေးခယျြသောက်သုံးသော။ နှိုငျးယှဉျ testosterone ဟော်မုန်း propionate vs cypionate, ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကတစ်နေ့အတွင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကတည်းကသင် propionate ရွေးနိုင်သည်, သင်မူကားနေ့စဉ်သင်၏အထိုးယူရှိသည်။
ရုံကအခြား steroids ကဲ့သို့ testosterone ဟော်မုန်း propionate အစောပိုင်း 1930s အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်းရည်ရွယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုကူညီအတွက်အရေးပါသောအဖြစ်မှသက်သေပြဘို့ကာယဗလအကြားတကမ္ဘာလုံးယခုရေပန်းစားသည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာယခုမူးယစ်ဆေးဝယ်လိုအားကြောင့်ထိုကဲ့သို့ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအဖြစ်တိုးတက်အောင် testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းအားသာချက်များပါဝင်သည်သောအသုံးပြုသူများတင်ဆက်အကျိုးကျေးဇူးများစဉ်းစားမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဒီဟော်မုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းယောက်ျားဝိသေသလက္ခဏာများလည်းမြင့်မားဝယ်လိုအားများအတွက်အခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
testosterone Propionate ဆေးတခါသောက်
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း propionate သင် 50-100 ရက်အကြာမှာထိုးသွင်းခံရဖို့ 2-3mgs ကနေအထိဖြစ်သောအသေးစားဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်သံသရာအစပြုသူတောင်းဆိုချက်များကို။ 200 ထံမှ 500mgs မှ testosterone ဟော်မုန်း propionate အကွာအဝေး၏အပတ်စဉ်ထိုး။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အလွန်အကျွံဆေးများယူသူကိုစတင်ဘို့ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင့်လျော်သောသောက်သုံးသောကိုငါပေးမည်။ သငျသညျများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ် testosterone ဟော်မုန်း propionate မီနှင့်အပြီး ကတာ။ အဆိုပါသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်အမြဲသတိရပါ။ သင်နေ့စဉ်ထိုးနှင့်အတူမသက်မသာဖြစ်ကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, သငျသညျတစ်လကြာသောဆေးထိုးဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။
testosterone Propionate တဝက် အသက်
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း propionate ဆေးပြား 24 နာရီတစ်ဝက်အသက်ကိုပေမယ်ထိုးဆေးလိမ်းဆေး4ရက်သတ္တပတ်အထိတစ်ဦးတက်ကြွစွာဘဝရှိပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင်လိုချင်တဲ့ရလာဒ်များအရ enable မညျဖွစျကွောငျးကိုအကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောကြားကာလဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ်။
မူးယစ်ဆေးပြီးနောက် 1930s အတွက်ဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်ကြွက်သားအဆောက်အဦတိုးတက်အောင်ကူညီရန်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်သက်သေပြခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကြီးထွားဖို့သူတို့ကိုဖွင့်သင့်လျော်သောအာဟာရများနှင့်အတူကြွက်သားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူမရသောအခါသင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားအတွက်လိုအပ်သောခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုမှီဖို့သေချာပါစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်သငျသညျဆိတျကှအခွားသူမြားစှာအကြားမျက်နှာဆံပင်၏အသံနှင့်ကြီးထွားနက်ရှိုင်းတူသောထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ယောက်ျားသည်အင်္ဂါရပ်များတိုးတက်မှုအဖြစ်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းကနေအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သို့သော်သင်၏ဆရာဝန်တိုင်ပင်အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း propionate ရလဒ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးထိုးဒေသများတဝိုက်ရောင်ရမ်းခြင်းပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချက်ချင်းပြန်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ရပြီးတော့သွားမပါဘူးဆိုရင်ဒါဟာအချို့အချိန်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားသင့်ပါတယ်။ သင်မူးယစ်ဆေးသင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသေချာမသိကြကတည်းကသည်အခြားကာယဗလနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးမျှဝေခြင်းအန္တရာယ်များရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲမတိုင်မီနှင့်သင့် testosterone ဟော်မုန်း propionate ထိုးတာပြီးနောက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
testosterone propionate အကျိုးခံစားခွင့်
လိင် drive ကိုမြှင့်တင်ရန်
Sustanon 250 Steroid တစ်မျိုး အနိမ့်ကိုသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုသူတို့အားများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုငြင်းပယ်အဆင့်ဆင့်ကနေခံစားနေရပြီးအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ Sustanon 250 အသုံးပြုသူများသူတို့ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏စကားသံကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြွက်သားခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ပင်ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်မျက်နှာဒေသများပေါ်တွင်ဆံပင်၏ကြီးထွားအဖြစ်အလိုရှိကြသည်တွင်, ယောက်ျားကိုဝိသေသလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Sustanon 250 သူတို့၏အလောင်းများကိုအလုံအလောက် testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးလူအားကူညီနိုင်ရန် 1970s အတွက် Organon ကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အများအပြားအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလမှစစ်မှန်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သက်သေပြကတည်းကကြောင့်စျေးကွက်မှဖြန့်ချိလိုက်ပြီးနောက်အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်းမှာလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ Sustanon 250, testosterone ဟော်မုန်း propionate ၏ 4mg, 30mg-testosterone ဟော်မုန်း phenylpropionate, 60mg-testosterone ဟော်မုန်း decanoate နှင့် 100mg-isocaproate ပါဝင်သော 60 ကွဲပြားခြားနားသော testosterone ဟော်မုန်း Ester ပေါင်းစပ်ပြီးဖွငျ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုထုတ်ကုန်အစွမ်းထက်နှင့်ကာယဗလနှင့်အခြားအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းပြဿနာများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အသုံးဝင်သောစေသည်။
Sustanon 250 ထိုးသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးမှသာတစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ပေးထားဒါမှမဟုတ်တချို့နေ့ရက်ကာလအဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရာ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့်3ရက်အကြာမှာနိုင်ပါသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးထို့ကြောင့်တက်ကြွအားကစားသမားများအတွက်စံပြမဖြစ်, ကမ္ဘာ့အ Anti-doping အေဂျင်စီများကပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြင့်သင့်ကြွက်သားပေါ်တွင်ဆေးဝါးထိုးသွင်းသို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်ကနေဆေးထိုးရရန်ဆေးခန်းပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတှကျအအချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးရဲ့ထက်ဝက်-ဘဝများစွာကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ကြောင့်စံပြအောင်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေမယ့်အမြဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားရန်ဆေးညွှန်းကိုကြည့်ပါ။
ကာယဗလများအတွက် Sustanon 250
အခြေခံအားဖြင့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုံအလောက် testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းခြင်းမရှိဘဲ, သင်တစ်ဦးကာယဗလမယ်အဖြစ်အလိုရှိကြသည်တွင်ကြွက်သားထုထည်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမအစားအသောက်များတွင်သို့မဟုတ်သင်နေ့စဉ်မယလေ့ကျင့်ခန်းအရေး, သင်သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်, ယောက်ျားကိုဟော်မုန်းရှိရမည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအထင်ကြီး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမရရှိစ, အရှင်, ပိုအီစထိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Sustanon 250 အဆောက်အဦးအပါအဝင်များနှင့်ပိန်ကြုံသောကြွက်သားထိန်းသိမ်းခြင်းအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အားလုံးပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးအတွက်ကူညီပေးသည်။
testosterone Sustanon 250 ဆေးတခါသောက်
ကာယဗလများအတွက်ညာဘက် Sustanon 250 သောက်သုံးသောတစ်ပတ်ကို 250mgs -1500mgs ကနေအထိသငျ့သညျ။ သို့သော် 500-750mg တစ်ပတ်ကိုအသုံးအများဆုံးထိုးဆေးထိုးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေကသုံးရက်အကြာမှာ Sustanon 250 ထိုးနှင့်အတူမသက်မသာခံစားမိလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အပတ်စဉ်ထိုးဘို့အသွားအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Sustanon 250 အကျိုးအမြတ်ဘာတွေလဲ?
သင်ဤမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးပြီးနောက်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်အထင်ရှားဆုံးလာဘ်ထိုးပြီးနောက်သုံးပတ်ဆက်မပြတ် testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သငျသညျလိုအပျသောခန္ဓာကိုယ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အခြား testosterone ဟော်မုန်းအကျိုးအမြတ်အကြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လိင် drive ကိုရပါလိမ့်မယ်ဆိုလို။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသုံးပါလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်စောင့်ကြည့်ဖို့သွေးစစ်ဘို့သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနိမ့်သို့မဟုတ်ပိုလျှံဟော်မုန်းပမာဏအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်သတိရပါ။ သင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးတာကနေရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အလွန်အကျိုးရှိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိန်ကြုံသောကြွက်သားထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
testosterone Sustanon 250 သံသရာ
သင်သာ Sustanon သုံးပြီးအသုံးပြုပုံသင်လိုအပ်ပိန်ကြုံသောကြွက်သားရဖို့မနိုင်ကတည်းက Sustanon 250 သံသရာသည်အခြားပါးစပ်ပါဝင်သည်။ ဤတွင်သံသရာ bulking အဆိုပါ Sustanon ဖြစ်၏
ရက်သတ္တပတ် Sustanon250 Dianabol Ostarine
1 500mgs / အပတ်က 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
2 500mgs / အပတ်က 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
3 500mgs / အပတ်က 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
4 500mgs / အပတ်က 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
5 500mgs / အပတ်က 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
6 500mgs / အပတ်က 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
7 500mgs / အပတ်က OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
8 500mgs / အပတ်က OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
9 500mgs / အပတ်က OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
10 500mgs / အပတ်က OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
11 500mgs / အပတ်က OFF 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / အပတ်က
* ed နေ့တိုင်းကိုဆိုလိုသည် / တစ်နေ့လျှင်
9။ testosterone Undecanoate
ဤသည်ဆေးတောင့်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးပုံစံကိုဖြစ်စေလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုအမြဲဥစ္စာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဆေးများ၏နှစ်မျိုးထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားသည်။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကောင်များနှင့်လူတို့သညျအများကြီးလိုအပ်နေသောဟော်မုန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးစံပြဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Undecanoate ထိုကဲ့သို့သောအသံပိုမိုနက်ရှိုင်း, အဆီဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကြွက်သားအဆောက်အဦအဖြစ်အထီးခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
testosterone undecanoate အသည်းကနေတဆင့်သွားရမ testosterone ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေးပေးရည်ရွယ်သည်ဟု Organon မူးယစ်ဆေးကုမ္ပဏီအားဖြင့် 1980 ရဲ့တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါး (အနေနဲ့ဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးအတွက်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်AASraw) ထိုယောက်ျားအတွက်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ကုသမှုအတွက်ကိုကူညီနိုင်ဘူး။ သို့သော်ရလဒ်များကိုပေးခြင်းနှငျ့ ပတျသကျ. အားကောင်းဖြစ်သက်သေပြနေကြသည်အခြား testosterone ဟော်မုန်း Ester ၏နိဒါန်း, testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ဖြည်းဖြည်းအများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအကြားလူကြိုက်များဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ testosterone undecanoate မ အလုပ်များ
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ယင်းဖဲစနစ်နှင့်မရကအခြား steroids ကဲ့သို့အသည်းကိုဖြတ်သွားတယ်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်သင်လေးရယ်ဖို့သက်ရောက်မှုကိုခံစားဆိုလိုတာကအသည်းအားဖြင့်ပျက်စီးသို့မဟုတ်ထိခိုက်ခံမရှိဘဲသွေးကြောထဲသို့ဝင်သော။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ရတဲ့အတွက် Steroid တစ်မျိုး၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်အခြား methyl steroids ကနေမတူညီတဲ့စေသည်။
testosterone Undecanoate ကာယဗလ
testosterone လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟော်မုန်း, Fats ဆုံးရှုံးအစှမျးသတ်တိရရှိမှုနှင့်အခြားယောက်ျားအင်္ဂါရပ်များအကြားကြွက်သားအဆောက်အဦများအတွက်အဘို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အတော်များများကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားမြားနှငျ့ကာယဗလသူတို့ရဲ့ကြွက်သားမြှင့်တင်ရန်အဖြစ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ကဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏အားသာချက်ယူပါ။ testosterone ဟော်မုန်း undecanoate အားနည်း Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ဟုပေမယ့်သင်ကသင့်လျော်သောအစားအစာဖြင့်လိုက်ပါသွားပိုမိုမြင့်မားသောက်သုံးသောယူသည့်အခါ, ကသင့်ရဲ့ကြွက်သားအဆောက်အဦများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်အပြုသဘောရလာဒ်များရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သျောလညျးကိုမှန်ကန်စွာမူးယစ်ဆေးမသုံးပါတဲ့သူတွေကိုသငျသညျအခြိနျမှာသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါလျှင်ကုသနိုင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ testosterone undecanoate ကာယဗလ သင်သာ 10 သို့မဟုတ် 14 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတခါယူနိုငျသော testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ဆေးထိုးဘို့အသွားလျှင်အကြီးအဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အခွအေနေပေါ်မူတည်ပြီးဆရာဝန်သင်တို့အဘို့သောက်သုံးသောနှင့်လက်ျာ testosterone ဟော်မုန်း undecanoate သံသရာဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတောင့ testosterone ဟော်မုန်း၏ထိုး undecanoate ဝက်ဘဝတစ်ခုသာနေ့အဘို့ပြေး, သင်နေ့စဉ်သင့်ရဲ့ထိုးယူရပါလိမ့်မယ်။
testosterone Undecanoate အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်အဓိက testosterone ဟော်မုန်း undecanoate အချို့သည်;
လိင် drive ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
testosterone Undecanoate ဆေးတခါသောက်
ကာယဗလသို့မဟုတ်အားကစားသမားများအတွက်တစ်နေ့လျှင် 480mg ပတ်လည် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate သောက်သုံးသောအကွာအဝေး။ သို့သျောလညျးကိုပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုသူများအတွက်, ဆရာဝန်အချိန်နှင့်အတူကတိုးမြှင့်ပြီးတော့ဆေးများကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ သင်ကတခြား steroids နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးပေါင်းစပ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ, 200-250mgs အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးညစာမတိုင်မီမနက်စာနှင့်ညနေပိုင်းထိုးမတိုင်မီကြောင်းအစားအစာများမတိုင်မီယူရပါမည်။
testosterone Undecanoate သံသရာ
သငျသညျ deca Durabolin, trenbolone နှင့် promobolan ကဲ့သို့အခြားပါးစပ်အတူဒီ Steroid တစ်မျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်အခြားပါးစပ်နှင့်အတူ andriol သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, ထိုသို့သောတစ်နေ့လျှင် 240mg အဖြစ်အနိမ့်ဆေးများအတွက်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုပါတယ်။ အဆိုပါ andriol စမ်းသပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အစေခံများနှင့်အခြားခံတွင်းမဆိုအပိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေရခြင်းမရှိဘဲကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။
ရက်သတ္တပတ် Andriol Promobolan Aromasin Cardarine N2Guard
1 250mg / ED 600mgs / အပတ်က 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / အပတ်က 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / အပတ်က 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / အပတ်က 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / အပတ်က 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
တစ်ရက်သို့မဟုတ်တိုင်းတစ်နေ့လျှင် * ED နည်းလမ်းများ
10။ Turinabol (Tbol)
ဒီအစပိုင်းတွင်အရိုး-ပိန်ဝေဒနာတွေကုသမှုအတွက်ဆေးဝါး Jenapharm ကုမ္ပဏီအားဖြင့်အရှေ့ဂျာမနီမှာ 1961 ထုတ်လုပ်ခဲ့ကာဟိုမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ က 1960s ဖို့ 1980s အတွက်အရှေ့ဂျာမန်အိုလံပစ်အောင်မြင်မှုအဘို့အစွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီးနောက်အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ Turinabol လက်ရှိတွင်အတူတူသူတို့လှုပ်ရှားမှုများတစ်လျှောက်လုံးကသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုနှင့်ကြွက်သားတိုးတက်လာဖို့အားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါလျှင်ကာယဗလ, သင်ချက်များမရရှိပစ်မှတ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ Turinabol မ အလုပ်များ
အဆိုပါ turinabol သောက်သုံးသောခံတွင်းဆေးတောင့်ပုံစံအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ လောလောဆယ်ဒီ Steroid တစ်မျိုးမထိုးဆေးပုံစံရှိပါတယ်။ မရှိပါ ရောင်းမည် TURINABOLနှင့်မူးယစ်ဆေးမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးများအတွက်ဝယ်လိုအားကြောင့်အသုံးပြုသူများပေး turinabol သက်ရောက်မှုစဉ်းစားမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကြွက်သားများတွင်နိုက်ထရိုဂျင်စုပ်ယူမှုနှုန်းမှာ၏ပမာဏတိုးတက်အောင်အဖြစ်သွေးနီဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်, ကြွက်သားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်တိုးတက်အောင်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။ အဆိုပါ turinabol သံသရာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်, သင်မူကားတပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်နှုန်းနေ့စဉ် 50mg ယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏ဆရာဝန်သင်၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောသံသရာဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Turinabol (Tbol) စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်ကြွက်သားတိုးမြှင့်တိုးမြှင့်အတွက်၎င်း၏ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြောင့်အများအပြားအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလများအတွက်အကောင်းဆုံး Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်ထွက်ရပ်။ လက်ျာအစားအစာနှင့်သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ခန်းအတူမူးယစ်ဆေးဝါးပူးတွဲသင်လိုချင်သောရလာဒ်များအရရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးကြီးထွားအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အဆီကိုမီးမရှို့ဖို့ကြွက်သားကို enable တံ့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုတိန်းနှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပြီး, သင်အိပ်မပျော်, ရေ retention ကိုများနှင့်သွေးတိုးနှင့်တူအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှကျရောက်နေတဲ့ထို့ကြောင့်ထို။
theTurinabol အချို့သည်သင်ဤမူးယစ်ဆေး features အသစ်တွေလည်းပါဝင် အသုံးပြု. ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်အကျိုးရှိ;
လူတို့သညျအဘို့အကြံပြု Turinabol သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 20gms မှ 50 ဖြစ်တယ်, သင်ပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုအခြားခံတွင်းနဲ့တွဲပြီးကကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ဦးကာယဗလမယ်သကဲ့သို့သင်တို့ရလဒ်ကိုရဖို့မြင့်သောဆေးညွှန်းကိုသုံးပါရန်ရှိသည်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်ရှိခဲ့သည်။ မြင့်မားသောဆေးညွှန်း virilization ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအမျိုးသမီးများတစ်နေ့လျှင် 2.5mgs မှ 7.5 ၏သေးငယ်တဲ့ turinabol ဆေးညွှန်းယူသင့်ပါတယ်။
Turinabol တဝက် အသက်
Turinabol (Tbol) 16 နာရီဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ ထိုသို့သင်သည်တစ်ချိန်ကတစ်နေ့လျှင်သင့်ရဲ့သောက်သုံးသောယူသင့်ပါတယ် - သို့သော်စံပြအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လည်းအဆင်ပြေဖြစ်သောနှစ်ခု 12 နာရီကြားကာလသို့သောက်သုံးသောကွဲများကဲ့သို့အချို့သောကာယဗလ။
ဤသည် Steroid တစ်မျိုးပိုကောင်းရလဒ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သော Dbol, N2Guard နှင့် Cardarine ကဲ့သို့သောအခြားခံတွင်းနဲ့တွဲသုံးနိုင်ပါသည်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလျှော့ချရန်။
ရက်သတ္တပတ် Tbol Dbol N2Guard Cardarine
သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုဘယ် testosterone ဟော်မုန်း Ester ပါသလဲ
အခုဆိုရင်သင်စျေးကွက်အပေါ်မရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး testosterone ဟော်မုန်း Ester တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းရှိသည်, ထိုစိန်ခေါ်မှုယခုသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုတဦးတည်းဆုံးဖြတ်အတွက်လာပါတယ်။ ပြည်သူ့အဘယ်အရာကိုသင်၏အဆွေခင်ပွန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါသင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမဖွစျစခွေငျးငှါ, အမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမှကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ပြည်သူ့ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ခန္ဓာကိုရေးစပ်သီကုံးရှိသည်, ကောင်းတစ်ဦးဆရာဝန်အမြဲတမ်းညာဘက်ကိုဆေးဝါးရွေးချယ်ရာတွင်မတိုင်မီပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အခွအေနေဆနျးစစျပါလိမ့်မယ်။
အနိမျ့ testosterone ဟော်မုန်းပြဿနာလိုချင်သောရလာဒ်များရရှိရန်တစ်ဦးချင်းကုသမှုလိုအပ်နေပါသည်။ သင်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်နှုန်းသွားလျှင်ဥပမာအားဖြင့်အချို့ acetate ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, အခြားသူများကို cypionate သို့မဟုတ်ပင် decanoate ကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့ကိုရည်ညွှန်းမည်ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ လက်ျာ testosterone ဟော်မုန်း Ester ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့သူ / သူမလက်ျာမူးယစ်ဆေးသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့အဘို့အညာဘက် testosterone ဟော်မုန်း Ester ရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်အကြံပေးချက်များဘာတွေလဲ?
တိုင်းကာယဗလမယ်၏အိပ်မက်ကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်, ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ရေး, နှင့်ခိုင်ခံ့သောပိန်ကြွက်သားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်အချို့သောအခြေအနေများသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အောင်မြင်မှုရရန်အခွင့်အလမ်းကိုငြင်းပယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကာယဗလ၏အများစုသူတို့တစ်တွေကျန်းမာသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အပြီးလိုအပ်သောကြွက်သားအောင်မြင်ရန်ဖို့ testosterone ဟော်မုန်း Ester ကိုအသုံးပြုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, သင်၏အလောင်းသည်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကာယဗလမယ်အဖြစ်လိုအပ်စွမ်းအင်နှင့်တကွသင်ပေးရန်လုံလောက်သော testosterone ဟော်မုန်းမရှိပါ။ သငျသညျသင့်လျော်သော Ester သူတို့နှင့်အတူမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်အဓိပ္ပာယ်။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့လက်ျာ testosterone ဟော်မုန်း Ester ကိုရှေးခယျြပါသနည်း
လောလောဆယ်စျေးကွက်က hard သင်အကောင်းဆုံးများထဲမှရွေးချယ်ဖို့အဘို့လုပ်စေခြင်းငှါ, ရာအမျိုးမျိုးသော testosterone ဟော်မုန်း Ester ပြည့်ဝ၏။ အားလုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့နှင့်သင့်ပြဿနာကိုအဖြေတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်ဆိုကြသည်။ သငျသညျကနျြးမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှအကူအညီကိုရှာအဖြစ်သို့သော်သင်အများကြီးအဖြစ်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ျာ testosterone ဟော်မုန်း Boosters ရွေးချယ်တဲ့အခါအောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ,
သငျသညျအကွံဉာဏျအဘို့သင့်ဆရာဝန်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ, ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုနားလည်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ပြဿနာလျှင်လိုအပ်သောပိန်ကြွက်သားအောင်မြင်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင့်ဆရာဝန်၏အလုပ်လွယ်ကူသောစေမည်ကြောင်းကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အဆီရှို့ချင်လျှင်ပင်။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Ester တိကျတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက်မတူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်။ အခြားသူတွေနဲ့အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုရမှမဟုတ်ကြစဉ်အခြားသူများကကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများအတွက်ဆေးဝါးအောက်တွင်လူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်။ ကနျြးမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်မှုမရှိဘဲသင်၏အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်ကနေမူးယစ်ဆေး purchasing တစ်ဦးအမှားလုပ်မထားပါနဲ့။ သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, ကတည်းကသင်သည်သင်၏အသက်တာကိုဒီလောက်စွန့်ပါလိမ့်မည်။
2။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Ester အမျိုးအစား
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Boosters အခြားသူများကိုညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနေစဉ်အချို့ကသဘာဝတွေဟာကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်လာ။ သင့်ဆရာဝန်သင်၏ကျန်းမာရေးအခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အကောင်းတစ်ဦးအနေအထားတွင်ရှိလိမ့်မည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းသတ္တိကိုအရေးကွီး; သင့်ခန္ဓာကိုယ်တချို့ဖြည့်စွက်နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ နောက်တဖန်သင်၏အ testosterone ဟော်မုန်းလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. အဆိုပါဆရာဝန်သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ကူညီခွင့်အမျိုးအစားကိုသိပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း Ester တူညီသောလမ်းအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်ဟာသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုအတွက်လာပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဝက်ဘဝရှိသည်, တချို့မူးယစ်ဆေး2သို့မဟုတ်3နေ့ရက်ကာလ၌တစ်ကြိမ်သာတစ်ပါတ်ကိုအခြားသူများအတွက်တခါယူခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုယခုသင်တို့အဘို့အထွန်းတောက်ဆေးညွှန်းရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်သင့်ဆရာဝန်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ သင်ထိုးဆေး testosterone ဟော်မုန်း Ester နှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်လျှင်, သင်ထားတဲ့ပါးစပ်မူးယစ်ဆေးရှာရန်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
သင် testosterone ဟော်မုန်း Boosters ရွေးချယ်ရာတွင်သို့မဟုတ်သုံးပြီးသောအခါအရေးအပါဆုံးအစွန်အဖျားတိုင်းခြေလှမ်းအတွက်သင့်ဆရာဝန်ပါဝင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကုသအကုန်အကျဖြစ်နိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်အခြေအနေကနောက်ပြန်လှည့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်စျေးအသက်သာဆုံးထုတ်ကုန်အဘို့အသွားလျှင်အရည်အသွေးနိမ့်ထုတ်ကုန်တွေရဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှရဲ့ကတည်းကလက်ျာ testosterone ဟော်မုန်း Ester ရွေးချယ်တဲ့အခါစျေးနှုန်းဦးစားပေးဘူး။ သို့သော်သင်တို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များထိရောက်မှုနှင့်အရည်အသွေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, မူးယစ်ဆေးအဘို့သင့်ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ကြပါဘူး။
Dudley, RE, & Constantinides, PP (2018) ။ အက်စ်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာအမှတ် 15 / 723,985.
Guercia, C တို့, Cianciullo, P. , & port, C. (2017) ။ အရည် Chromatography-high resolution ကတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry အားဖြင့် mussels များ၏အစာခြေဂလင်းအတွက် testosterone ဟော်မုန်းဖက်တီးအက်ဆစ် Ester ၏ analysis ။ steroids, 123, 67-72 ။
Chen က FJ, Patel က, သင်္ဘော MV, Fikstad, ၎င်းကို, Zhang က, အိပ်ချ်, & Gillyar, C. (2018) ။ အက်စ်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာအမှတ် 15 / 714,541.
7734 Views စာ
သငျသညျ DMAA ယူမီကိုသိရန်ရှိသည် 10 အမှုအရာ သင်ကရောင်းရန် Dianabol Powder အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို